देउवा सरकार रनभुल्ल परेका बेला अर्थतन्त्र जोगाउन एमाले ओर्लियो मैदानमा | Prahar News
देउवा सरकार रनभुल्ल परेका बेला अर्थतन्त्र जोगाउन एमाले ओर्लियो मैदानमा
आइतबार, चैत्र २७ २०७८
काठमाडौं । सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक कदम अगाडी देखिएको चर्चा हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ अगाडी बढिसकेको चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहदा पनि खासै वास्ता नगरेको देउवा सरकार भन्दा एमाले गम्भीर बनेको भन्दै प्रशंसा हुन थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई सहभागी गराएर मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार आज होटल हिमालय कुपन्डोलमा मध्यान्ह १२ः३० बजे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको छ।
उनले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिने बताए। कार्यक्रममा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडा सहभागी हुने बताइएको छ।
शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको बताएका थिए। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेकोलगायत समसामयिक विषयमा पनि एमालेले आज धारणा राख्न लागेको छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन गभर्नर अधिकारीले प्रयास गरिरहेको अवस्थामा उनलाई सरकारले निलम्बन गरेको एमालेको आरोप थियो।
काठमाडौंको मेयरमा पराजित भएपछि केशव स्थापित भए सक्ड: दिए नसोचेको प्रतिक्रिया, अब त यसो पो भन्न थाले ! (भिडियोसहित)
राजेन्द्र लिङ्देन चिप्लिएकै हुन् ? बाबुरामहरुकै पथ समातेको भन्दै आफ्नै नेताकार्यकर्ता बने आक्रोशित !
जितको औपचारिक घोषणापछि बालेनले गरे ठूलो घोषणा
नेपालमा प्रचण्डले ओलीलाई दिएको चेतावनीको झल्को दिनेगरी चीनले अमेरिकालाई दियो यस्तो चेतावनी
एमाले र नेकपा एसको कुरा यहानिर आएर मिल्यो ठ्याक्कै
बालेनले इतिहास रचेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नै डरले काप्न थाले थरथर, बालेनको नाम लिदै संसदको रोस्टमबाटै यतिसम्म भनिदिए ! (भिडियोसहित)
ओलीले आफ्नो छेउमै बसेका सभामुख सापकोटालाई यतिसम्म भन्दै थर्काएपछि…
नैतिकताका आधारका अध्यक्षबाटै राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्र अब के गर्छन् ? बाहिरियो उनको भित्री तयारी !
अकल्पनिय रुपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य बढाइरहेको आयल निगम खारेज गर्न अर्बौँको ’डिल’, देशकै पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट भयो ठूलो खुलासा !
रोष्ट्रमबाट ओलीले आरजुको नाम उच्चारण नगरी कडा व्यङ्ग कसेपछि देउवालाई भयो ऐठन, बसेकै ठाउँबाट फर्काए जवाफ (भिडियोसहित)
केशव स्थापितलाई प्रश्न सोध्दै माफी माग्न लगाउने युवती भावना राउत पार्टीको अमुक कार्यकर्ता
विप्लवसहित यी शीर्ष नेताहरु स्थानिय तहको निर्वाचन लड्न यसरी भए सहमत, यो दलसँग तालमेल गर्ने